Nkọwa:Akpa Inyoghi Azu Uhie,Ihe akụrụngwa na-adọba ụgbọala na Led,Ntughari nke a na-eme maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Home > Ngwaahịa > Ihe nnweta ozuzu ọkụ > Ihe nlekota nke 80W maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ihe Nlereanya.: BB-SDD-80W-D1
Ihe nnweta kpochapu ọkụ nke 80W anyị kwadoro ngwa gị na ngwa ngwa nke kachasị mma. Ụlọ ọrụ a na- erekwa ụgbọala nke a na-adọba ụgbọala na Led a nwere ihe dị mgbagwoju anya nke 120LM / W na onye na-edozi ike na nchekwa nke ọma maka 250-watt metal halide na nnukwu nrụpụta sodium. Na MeanWLL Driver na PHILIPS LEDs, Aluminom ihe onwunwe, anyị 80W Led Retrofit maka Shoebox Fixtures na-enye ngwa ahụ ihe ndụ dị ịtụnanya nke ndụ 50,000, ma ọ bụ afọ 10 na-eji ụbọchị 3 / ụbọchị eji ezigbo mma na ọkọlọtọ.
80w na- adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala enwere ike idozi ngwa ngwa n'ime ihe ọ bụla, karịsịa maka Wall Pack Light, Mpempe ụgbọala / Gburugburu Gburugburu, Light Street, Egwuregwu Gas ma ọ bụ Ìhè.
Anyị niile na- eduzi igwe ehi ụbụrụ bụ 5 Afọ Unlimited akwụkwọ ikike, ọ pụtara na anyị nwere ị kpuchie!
Akpa Inyoghi Azu Uhie Ihe akụrụngwa na-adọba ụgbọala na Led Ntughari nke a na-eme maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Ahịa Igwe Uhie Ike Igwe Uhie Ejiri Izu Uhie Mbara Igwe Uhie 25w Igwe Uhie Ochie Elu Uhie